Hlola ezi Ncedisi zeeNcwadi zeeNkcukacha ze-Macroeconomics ze-Intanethi
Yonke i-Knowledge ye-Economics Bookbook Online
Namhlanje, kukho izibonelelo ezininzi ezifumanekayo kubafundi bezoqoqosho. Indawo entsha enolwazi olucebile uye wavula ithuba lokufunda oluphuculweyo kwaye wenze uphando ngokulula kwaye lufikeleleke lula kubafundi bezoqoqosho. Ingaba ufuna ukunyusa izifundo zakho zaseyunivesiti, cima ngokubanzi uphando lwakho loqoqosho lweprojekthi, okanye uqhube uphononongo lwakho lwezoqoqosho, thina kwi-About.com siye saqulunqa uluhlu lwezinto ezibonakalayo zezoqoqosho kunye nokuzihlanganisa kwi-macroeconomics enzulu yeencwadi.
Isingeniso kwi-About.com ye-Macroeconomics Bookbook
Incwadi ye-inthanethi ye-About.com ye-macroeconomics iboniswe njengesihlomelo sezonxibelelwano kwiinkalo ezahlukeneyo kunye namanqaku kwizihloko eziphambili ze-macroeconomics ezigqibeleleyo kumfundi we-economics, umfundi we-undergraduate, okanye umntu ozama ukuxubusha kwiingcamango eziphambili ze-macroeconomics. Ezi zixhobo zinika ulwazi oluninzi njengeencwadi zakudala ezibhalwe ngobuqili ezibhalwe kwi-syllabi yesikolo, kodwa kwifomathi efikeleleka kalula ekhuthaza ukuhamba kwamanzi. Kwakhona kufana nezo ncwadi zezoqoqosho ezibizayo ezihlaziywa kunye nokuhlaziywa njengoko zipapashwa kwizixhobo ezalandelayo, izixhobo zethu zokufunda ze-macroeconomics zihlala zihlaziywa ngolwazi olutshanje nolona luncedo kakhulu-ezinye zazo ziqhutywa ngabafundi njengawe!
Nangona nganye incwadi yesifundo se-macroeconomics isezantsi kwimiqulu emininzi, ngalinye liyakwenza ngendlela eyahlukileyo kuxhomekeke kumvakalisi kunye nendlela abalobi abakhetha ngayo ukubonisa ulwazi.
Umyalelo esiwunyulileyo ukubonisa izibonelelo zethu ze-macroeconomics ichitshiyelwe kwi-textin e-Parkin neBade yecingessenti, Economics.
Gcwalisa i-Macroeconomics Bookbook
ISAHLUKO 1: Yintoni i-Macroeconomics?
Ukuhlanganiswa kwamanqaku azama ukuphendula lo mbuzo obonakala ubulula, "yintoni ezoqoqosho?"
ISAHLUKO 2: Ukungasebenzi
Uviwo lweemfuno ze-macroeconomics ezungeze ukungabikho kwemisebenzi kuquka, kodwa kungaphelelanga, ukuveliswa kunye nokukhula kwemali, ukunikezelwa kunye nemfuno yabasebenzi kunye nemvuzo.
ISAHLUKO 3: Imveliso yamanani kunye nokuPhula
Ukujongwa kweengcamango ezisisiseko ze-macroeconomics yokunyuka kwamaxabiso kunye nokuchithwa kwamanani, kubandakanywa iimviwo zamanqanaba exabiso, ukunyuka kwemfuno-ukukhupha umthamo wexabiso, ukuguqulwa kwamanani kunye ne-Phillips curve.
ISAHLUKO 4: UMveliso weZindlu eziPhezulu
Funda ngeengcamango zomkhiqizo owenziwe ekhaya okanye i-GDP, yintoni eyilinganisayo, kwaye ibalwa kanjani.
ISAHLUKO 5: I-Cycle Business
Fumana enye yezitshixo zokuqonda ukuba zixesha lini kodwa ukungahambi ngokungafaniyo kwezoqoqosho, ukuba zintoni, zithini ukuba zithini, kwaye ziziphi izalathisi zoqoqosho ezibandakanyekayo.
ISAHLUKO 6: Ukufunwa ngokubanzi kunye noNcediso
Ukubonelela kunye nokufunwa kwinqanaba le-macroeconomic. Funda malunga nokubonelelwa kunye nokufunwa kunye nendlela ekuchaphazela ngayo ubudlelwane bezoqoqosho.
ISAHLUKO 7: Ukusetyenziswa nokulondoloza
Funda ukuhlalutya iimpawu zokuziphatha zentsebenziswano ngokusindisa.
ISAHLUKO 8: UMgaqo-nkqubo wezeMali
Fumana iinkqubo kunye nezenzo zoorhulumente waseUnited States ochaphazela uqoqosho lwaseMerika.
ISAHLUKO 9: Iimali zemali kunye nenxaxheba
Imali yenza ihlabathi, okanye kunoko, uqoqosho luya kujikeleza.
Hlola izinto ezahlukeneyo zezoqoqosho ezichaphazela imali.
Qinisekisa ukuba uhlolisise iziqendu zesahluko zeengcamango ezinzulu:
- Ukufuna Imali
- Umgangatho wenzala
ISAHLUKO 10: Umgaqo-mali weMali
Njengomgaqo-nkqubo wezemali we-federal, urhulumente wase-United States ulawula umgaqo-nkqubo wezemali ochaphazela uqoqosho.
ISAHLUKO 11: Imivuzo kunye nokungasebenzi
Ukujonga ngokujulileyo kubaqhubi bomvuzo kunye nokungasebenzi, qiniseka ukuba uhlolisise iziqendu zesahluko ukuze ufumane ingxoxo engaphezulu:
- Ukuvelisa & Ukukhula kweNgeniso
- Ukufuna nokunikezelwa kwemisebenzi
- iMvuzo neMisebenzi
ISAHLUKO 12: Imveliso
Ukujonga ngokujulileyo kubaqhubi bexabiso lokunyuka kwamaxabiso, qi niseka ukuba ukhangele iigatshana zesi sahluko ukuze ufumane ingxoxo engaphezulu:
- Ixabiso lentengo kunye neNqanaba lentengo
- Cela-Yenza Imveliso Yemali
ISAHLUKO 13: Ukuqwalaselwa nokukhutshwa
Izigaba zomjikelo wezoshishino ziyagxininiswa kunye nokuvela kweentlawulo kunye nokuxothwa. Funda malunga nokuwa okunzulu kwezoqoqosho.
ISAHLUKO 14: Ulwaphulo lukaRhulumente kunye namatyala
Ukufumanisa igalelo likarhulumente karhulumente kunye nokulahleka kwemali kuluqoqosho.
ISAHLUKO 15: Urhwebo lwamazwe ngamazwe
Kuqoqosho lwangoku lwehlabathi, ukuthengiselana kwehlabathi kunye neentengiso zamazwe ngamazwe kunye neenkxalabo zalo malunga nemirhumo, iintlawulo, kunye nokutshintshisiswa kwamaxabiso ngokuqhubekayo phakathi kwemiba ephikisana kakhulu.
ISAHLUKO 16: Ukulingana kweentlawulo
Hlola ibhalansi yeentlawulo kunye nendima edlala kulo qoqosho lwamazwe ngamazwe.
ISAHLUKO 17: IiRhafu zokuThengiswa
Ukutshintshwa kwamaxabiso kubaluleke nakakhulu kwimpilo yezoqoqosho njengoko uhwebo lwamazwe ngamazwe luqhubeka luba nefuthe elikhulu kwizoqoqosho zasemakhaya.
ISAHLUKO 18: UPhuhliso loQoqosho
Ngaphandle kwemida yase-United States, hlola iingxaki zezoqoqosho ezijongene namazwe asakhulayo kunye nehlabathi lesithathu.
Ukufunyanwa kwabathengi kunye noPhuculo lwabathengi beMifanekiso
Oko Okumele Ukwazi Ngoo-Econometrics
Funda iNkcazo Yintoni Umthetho we-Okun kwi-Economics
Inkcazo ye-Ex Ante / Ex-Ante
Utywala obungenasiphelo Inkcazo kunye neFomula
Ziziphi iiNzululwazi zoLwazi?